11.03 Aoka ho madio sy masina ianareo
Ny teny hovakiantsika anio Alahady 11 Marsa 2018 ka hakantsika ny sakafom-panahy dia izay voasoratra ao amin' ny Levitikosy 11.24-47, ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no baiko mipetraka sy ny fomba tokony hankatoavako izany eo amin' ny fiainako ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
24 Dia ireo no ho zava-maloto aminareo; ary izay rehetra mikasika ny fatiny dia haloto mandra-paharivan’ ny andro.
25 Ary izay rehetra mitondra ny fatiny dia hanasa ny fitafiany ary haloto mandra-paharivan’ ny andro.
27 Ary izay rehetra mandeha amin’ ny faladiany, amin’ ny biby rehetra izay mandia tongotra efatra, dia zava-maloto aminareo; haloto mandra-paharivan’ ny andro izay rehetra mikasika ny fatiny.
28 Ary izay mitondra ny fatiny dia hanasa ny fitafiany ka haloto mandra-paharivan’ ny andro; ho zava-maloto aminareo ireny.
29 Ary izao no haloto aminareo amin’ ny biby izay mandady na mikisaka amin’ ny tany : ny kionkiona sy ny totozy ary ny sitry, isan-karazany,
31 Ireo no maloto aminareo amin’ ny biby rehetra izay mandady na mikisaka; izay rehetra mikasika ny fatin’ ireo dia haloto mandra-paharivan’ ny andro.
32 Ary izay zavatra rehetra ilatsahan’ ny fatin’ ireo, na fanaka hazo, na fitafiana, na hoditra, na lasaka, izay mety ho fanaovan-javatra na inona na inona, dia haloto, ka tsy maintsy hatao anaty rano izany, ary haloto mandra-paharivan’ ny andro izy vao hadio.
33 Ary ny amin’ ny vilany tany rehetra izay ilatsahan’ ny fatin’ ireo, dia haloto izay ao anatiny na inona na inona, ary ny vilany dia hovakinareo.
34 Ary ny hanina fihinana rehetra, izay asian-drano, sy ny fisotro rehetra izay sotroina dia haloto koa, na tamin’ ny fanaka inona na tamin’ ny fanaka inona.
35 Ary haloto izay zavatra rehetra ilatsahan’ ny fatin’ ireo, na fanendasana, na vilany mirakotra, dia hovakivakina izany; fa maloto ireny, ary ho zava-maloto aminareo.
37 Ary raha misy fatin’ ireo latsaka amin’ ny voan-javatra famafy, izay efa hafafy, dia hadio ihany izany.
38 Fa raha misy voan-javatra nalona tamin’ ny rano ka ilatsahan’ ny fatiny, dia ho zava-maloto aminareo izany.
39 Ary raha misy maty izay biby fihinanareo, dia haloto mandra-paharivan’ ny andro izay mikasika ny fatiny.
40 Ary izay mihinana amin’ ny fatiny dia hanasa ny fitafiany, ary haloto mandra-paharivan’ ny andro; ary izay mitondra ny fatiny dia hanasa ny fitafiany sady haloto mandra-paharivan’ ny andro.
41 Ary ny zavatra rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany dia ho zava-betaveta aminareo ka tsy ho fihinana.
42 Izay rehetra mandady amin’ ny kibony sy izay rehetra mandia tongotra efatra ary izay rehetra maro tongotra, dia ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany, dia tsy ho fihinanareo, fa zava-betaveta ireny.
43 Aza mametaveta ny tenanareo amin’ izay biby mandady na mikisaka; ary aza mandoto ny tenanareo aminy, mba tsy hahaloto anareo izany.
44 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, dia manamasina ny tenanareo, ka dia ho masina hianareo, satria masina Aho; ary aza mandoto ny tenanareo amin’ izay zavatra mandady na mikisaka amin’ ny tany.
45 Fa Izaho no Jehovah Izay nitondra anareo niakatra avy tany amin’ ny tany Egypta, mba ho Andriamanitrareo, ka dia ho masina hianareo, satria masina Aho.
46 Izany no lalàna ny amin’ ny biby sy ny vorona sy ny zava-manan-aina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano ary ny zava-manan-aina rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany,
AOKA HO MADIO SY MASINA IANAREO
Mandosira ny fahalotoana, midiova raha sendra naloto :
Teo amin’izay nentin’Andriamanitra hampahafantarana ny zanak’Isiraely fa misy ny zava-maloto izay tsy tokony hohanina na hifampikasokasohana no nilazany ny fikasihana fatim-biby ho mahaloto.
Na olona, na zavatra no mikasika fatim-biby dia maloto. Mila midio sy diovina na soloina ireny. " Fa fahafatesana no tambin’ny ota " (Romana 6.23).
Ny hananana toe-po mahatsiaro rikoriko amin’ny fahotana izay nitondra ny fahafatesana no kendren’ny didy. "
Ary izao no angatahiko, dia ny mbola hitomboan’ny fitiavanareo bebe kokoa amin’ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanan-tsiny ho amin’ny andron’i Kristy ianareo." (Filipiana 1.9-10)
Tadiavina ny fahamasinana :
Ny fahamasinan’Andriamanitra dia tsy afaka mifandray amin’ny loto sy faharatsiana na dia hevirina ho kely sy tsy dia maninona loatra aza ireny.
Ny hany azo atao raha te hanatona azy dia ny fanamasinan-tena sy fanamasinana izay zavatra rehetra mahakasika ny fiainana.
Ny masina dia midika ho tsy misy petipentim-paharatsiana fa madio ary voatokana ho an’Andriamanitra irery ihany.
“ Miezaha mitady … fahamasinana ;
fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. ”
Ho saintsainina :
Tsy ny fahotana ihany no ilana fiaroavan-tena,
fa izay rehetra mety mitarika mankamin’ny fahotana,
na olona izany, na toerana, na zavatra.
“ Tompo ô !
Arovy aho ka omeo hery mba tsy handoto ny foko, ny saiko, ny fanahiko
sy tenako amin’izay zavatra tsy manome voninahitra Anao.”